Ronaldo oo sharaxay waxa uu doonayo inuu ku garaaco Messi, kahor inta uusan ka fariisanin kubadda cagta – Gool FM
(Yurub) 18 Sebt 2019. Cristiano Ronaldo ayaa raadinaya inuu kubadda cagta ku soo gabagabeeyo isagoo heysta abaal-marino Ballon d’Or ee ka badan inta uu heysto kabtanka xulka qaranka Argntina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
Dhinca kale weeraryhanka reer Portugal iyo kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa tilmaamay inuu u qalmo inuu gaaro guushan kahor inta uusan ka fariisan kubadda cagta.
Xiddigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa ku wada guuleystay min 5 jeer abaal-marino Ballon d’Or, iyadoo ay markale sanadkan si xoogan ugu dagaalami doonaan, waxaana loolanka ku wehliya daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk.
Wareysi uu siiyay Cristiano Ronaldo “Piers Morgan” ayaa inta lagu gudi jiray wuxuu ku sheegay:
“Tartamaaga ugu fiican ee aan wajahay waa Lionel Messi, wuxuu igu riixay inaan noqdo ciyaaryahan fiican, anigana sidoo kale waxaan ka dhigay inuu noqdo ciyaaryahan fiican, waa shaqsi iyo laacib aad u fiican, waa taariikhda kubadda cagta”.
Intaas kaddib Cristiano Ronaldo ayaa la weydiiyay su’aal aheyd guusha uu doonayo inuu gaaro kahor inta uusan ka fariisan kubadda cagta wuxuuna ku jawaabay:
“Waxaan doonayaa inaan noqdo xiddiga ugu badan ee ku guuleysta abaal-marinta Ballon d’Or, waan jeclaan lahaa arrintaas, waxaana u maleynayaa inaan u qalmo”.
“Aniga ahaan, waxaan ahay lambarka koowaad ee taariikhda, laakiin taageerayaasha qaar, haddii lambarka koowaad ay u arkaan ciyaaryahan kale, waxaan ahay kan labaad, waan ogahay inaan ku jiro taariikhda kubbada cagta, isla markaana aan ka mid ahay ciyaartoyda ugu weyneyd ee abid”.